नेकपामा फेरिँदै समीकरण, रामवीर बने मोहरा !
काठमाडौं – प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिने घोषणा गरेको विषयले राजनीतिक माहोल गर्माएको छ ।
सांसद मानन्धर स्वयंले पनि वामदेवका लागि स्थान खाली गर्न आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । मानन्धरले पार्टीले निर्णय गर्नासाथ सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै गरिसकेका छन् । अब पार्टीले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषयले वामदेव काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट उम्मेदवार बन्ने कि नबन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
रामवीरले राजीनामा दिने निर्णय गरेसँगै नेकपाका नेता कार्यकर्ता विभाजित भएका छन् । वामदेवलाई सांसद बनाउनु हुने र नहुने पक्षमा नेकपाको शीर्ष नेतृत्व नै विभाजित भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्र रामवीरले राजीनाको घोषणा गर्नुलाई कतिपयले ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’को रूपमा लिइएपनि त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्ने अवस्था छैन । ओलीको विश्वास पात्र भनिएपनि पछिल्लो समय मानन्धर ओलीसँग टाढिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीसँग भेटेर कुराकानी गर्न खोजेपनि मानन्धरले भेट्न पाएका थिएनन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने वामदेवलाई सांसद बनाउन लागिपरेका छन् ।
नेकपाका अर्का नेता माधवकुमार नेपाल पनि रामवीर प्रकरणमा मौन बसेका छन् । उनले मौन स्वीकृति दिएको कतिपयको बुझाइ छ । पराजित भएर पनि प्रचण्डले संसदमा ल्याएका कारण प्रधानमन्त्री बनेका नेता नेपाल वामदेवलाई संसदमा ल्याउन सकारात्मक भएको नेकपाका एक नेताले बताए ।
वामदेवलाई संसदमा ल्याउन नहुने पक्षमा नेकपाको सचिवालयमा ईश्वर पोखरेल रेहेका छन् । ‘अरु नेता वामदेवको पक्षका सकारात्मक देखिएका छन्,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘पोखरेलले भने वामदेवलाई पार्टीमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्नुभएको छ ।’
बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेट्न जानुपूर्व पोखरेलले कूटनीतिक रूपमा त्यसको विरोध गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पोखरेलले लामो विचार राख्ने क्रममा लेखेका छन्, ‘दुर्भाग्यपूर्ण सम्भावनालाई पराजित गर्न विगतमा हामी स्वयंले स्थापित गरेका कुरामा आधारित हुँदै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । हाम्रा राम्रा र हामी स्वयंले विकास गरेका राम्रा कुराले मात्र हामीलाई बचाउन सक्नेछन् ।’
मन्त्रीको लोभ !
नेकपा स्रोतका अनुसार मानन्धर यत्तिकै सांसद पद छोड्न तयार भएका होइनन्, उनले गतिलो आश्वासन पाएका छन् ।
२० वर्षदेखि उक्त क्षेत्रमा जित हात पार्दै आएका रामवीर पहिला काठमाडौं महानगरपालिकाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि उनी लगातार दुई पटक सांसद बने । ओलीको विश्वास पात्र, काठमाडौंको रैथाने नेवार समुदाय र दुईदुई पटक अत्याधिक मतसहित चुनाव जित्दा पनि रामवीरले लाभको पद पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको चुनावका बेला रामवीरले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्ने रुचि देखाएका थिए । तर ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जितेपछि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि मानन्धर पछि हटे । तर उनी मन्त्री बन्न सकेकन् । मन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षाले उनलाई पाँच वर्षका लागि जितेको निर्वाचन क्षेत्र छोड्छुभन्दा कुनै संकोच नलागेको पूर्व एमालेका एक नेताले बताए ।
प्रचण्ड र वामदेवले दुई वर्षपछि खाली हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लगेर मन्त्री बनाउने आश्वासनमा मख्ख परेर रामवीरले पद छाड्न लागेको पूर्व एमाले नेता÷कार्यकर्ताको आरोप छ ।
नेकपामा फेरिएको समीकरण
पार्टी एकता भएको पाँच महिनापछि नेकपामा गुटगत अभ्यास शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफू पक्षधरलाई पेलेको र सरकारले राम्रो काम नगरेको भन्दै नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल आफू पक्षधर नेतालाई जमघट गर्न थालेका छन् भने समानान्तर कमिटी बनाउने कसरत पनि गरिरहेका छन् ।
नेता नेपाल पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता वामदेव गौतमसँग नियमित छलफलमा रहेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीसँग खास सन्तुष्ट नरहेका पूर्व माओवादी नेताहरू पनि नेता नेपालको निकट पुगेका छन् । पार्टी एकताका क्रममा ओलीसँग दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा सहमति गरेका प्रचण्ड ओलीले सरकार पाँच वर्ष चल्छ भन्ने अभिव्यक्ति अमेरिकाबाट फर्कँदा दिएसँगै संशयमा पुगको र सोही कारण उनी नेता नेपाल र वामदेवसँग नजिक पुगको नेकपाका एक नेताले बताए ।